सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको आईपीओ बिक्री खुल्यो, कति दिने आवेदन ? - Birgunj Sanjalसानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको आईपीओ बिक्री खुल्यो, कति दिने आवेदन ? - Birgunj Sanjalसानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको आईपीओ बिक्री खुल्यो, कति दिने आवेदन ? - Birgunj Sanjal
सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको आईपीओ बिक्री खुल्यो, कति दिने आवेदन ?
२१ आश्विन २०७७, बुधबार १०:०२
वीरगंज। सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सले आज (असोज २१ गते) देखि धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणलाई प्रतिसेयर १०० रुपैयाँअंकित मूल्यमा ३० करोड रुपैयाँबराबरको ३० लाख कित्ता आईपीओ बिक्री खुला गरेको हो ।
२०७७ असार १४ गते आईपीओ निष्कासन अनुमति माग गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको कम्पनीलाई बोर्डले २०७७ असोज ६ गते निष्कासन अनुमति दिएको थियो । कम्पनीको आईपीओमा छिटोमा असोज २५ गतेसम्म र उक्त समयमा पर्याप्त आवेदन नपरे कात्तिक ६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम एक हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ ।
कम्पनीको आईपीओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आस्वा सदस्यको अनुमति पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साथै मेरोसेयरबाट आवेदन दिन सकिनेछ ।